Qareenka Baadari ku xiran Turkiga oo dalbaday in la sii daayo
Qareenka wadaadka Mareykanka ah ee Turkiga loogu maxkamadeynayo eedeymo la xiriira argagixiso ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay, in eedeysanuhu uu Talaadada maanta ah dalbaday in lasii daayo, kadib markii uu muddo xabsi guri ahaa, isagoo sidoo kalena codsaday in laga qaado xannibaadda dhinaca socdaalka ah ee lagu soo rogay.
Qoraal ay nuqulkiisu wakaaladdu heshay ayaa lagu sheegay, in ay lama huraan tahay in Maxkamaddu aanay ku lug yeelan siyaasadda, xorriyaddiisana usoo celiso baadarigan lagu magacaabo Andrew Craig Brunson.
Xarigga Brunson ayaa xiisad dhinaca Siyaasadda ka ah ka dhex abuurtay waddamada Turkiga iyo Mareykanka, taasoo gaartay in hadallo kulkulul ay madaxda labada waddan hawada isku mariyaan.
Turkiga ayaa hadda waajahaya qalalaase dhinaca dhaqaalaha ah. Qiimaha Liirada ayaa si aad ah maalmihii lasoo dhaafay hoos ugu dhacay iyadoo laga cabsi qabo in arrintaasi ay Ankara sicir-barar ka abuurto.
Madaxweynaha Turkiga ayaa Mareykanka ku eedeeyay inuu isagu sabab u yahay dhibaatadan oo uu dalkiisa kusoo qaaday dagaal dhinaca dhaqaalaha ah, waxaanu ku gooddiyay inuu baadi-goob u gali doono saaxiibo cusub oo u buuxiya booska Mareykanka, haddii uu xaalku sidan kusii socdo.